Ego ole ka ụlọ ọrụ gị na-ana? | Martech Zone
Enwere naanị otu Wal-mart. Wal-mart bụ ụlọ ọrụ nwere naanị otu uru uru: ọnụ ala dị ọnụ ala. Ọ na-arụ ọrụ na Wal-mart n'ihi na ha nwere ike ree ngwaahịa yiri nke ahụ dị ọnụ ala karịa ụlọ ahịa azụmaahịa na-esote.
Not bụghị Wal-mart. Nweghị ike ịrụ ọrụ iji chọpụta otu esi belata ọnụahịa kwa ụbọchị. Ikwesighi. Companylọ ọrụ gị pụrụ iche ma nwekwaa ihe ụlọ ọrụ ọzọ enweghị inye.
Ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịbụ ịmata onwe gị n'etiti asọmpi ahụ. Adọla mpi! Chọpụta ihe dị iche banyere gị na otu o si daba na mkpa gị. Nye atụmanya gị na ntụnye na akụkọ ndekọ mbụ nke otu ị siri nye ndị ahịa gị.
E nwere Threedị Threelọ Ọrụ Atọ:
Ieslọ ọrụ ndị butere ihe karịrị ụgwọ
Ndị ụlọ ọrụ na-ebuga
Ndị ụlọ ọrụ na-enyefe = anaghị akwụ ụgwọ
IMHO, ndị a bụ naanị ụdị azụmaahịa. Ndị ụlọ ọrụ na-ebuga ike overcharge, price ị na-akwụ bụ akụkụ nke nnyefe. Okwu abụọ a na ibe ha.
Lọ ọrụ ndị na-ebufe ụgwọ ego kwesịrị ekwesị ma ọ bụ n'okpuru uru nke ihe ha nyere. Imirikiti n'ime ha na-akwụ ụgwọ. Probably nwere ike ịbụ otu n’ime ha.
Ahụla m ndị na-ere ahịa ihe ruru ọtụtụ narị puku dollar, mana ha nyefere naanị obere akụkụ nke uru ahụ. Enwere m ndị enyi m nyeferela nke ọma Ọzọ bara uru mana ha na-agbasi mbọ ike ịdị na-ese n'elu mmiri.
Not bụghị Wal-mart, kwụsị ịnye ọnụahịa onwe gị dị ka ya. Ikwesiri ka karia.
Tags: adeolonohika oru ndiChandlerburu ibumamamobbaseegwu ekwentimusic mobile ngwamịsinneilbermanSpotifyịkọ akụkọ
Kedu onye na-akpọ Twitter?
Ekwentị mkpanaka: Ego ole ka Ekpe
Sep 26, 2008 na 4:16 PM
Amen Doug! Enweghị m ike ikwenye karịa. Echere m na ọ bụ ihe nwute na otu ọha mmadụ, anyị etinyego uche na PRICE. Ọ na-eme ka o sie ike igosi ezigbo ALLỌ! Nanị ihe mkpuchi ọlaọcha bụ na ọ bụrụ na ị napụta ndị ahịa gị n'ezie (n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ abụghị) ha ga-elebara ọrụ gị anya ma (nwee olileanya) tụọrọ ya ndị ọzọ. Isi ihe dị iche na ọnụahịa na uru bụ ahịa n'ezie.
Sep 27, 2008 na 12:22 PM
Ihe nzuzu bụ na nchekwube ndị mmadụ na ọnụahịa na-eduga ha na imefu ọtụtụ ihe - ọkachasị mgbe atụmatụ ha kwụrụ maka ọdịda na ha ga-etinyekwu ego iji merie ọdịda ahụ.
Sep 27, 2008 na 10: 59 AM
Ezi post Doug na ntụpọ na. M na-achọ mgbe mgbe ịiche ọdịiche dị n'etiti ndị na-asọmpi m ma gbalịa ime ya n'ụzọ ole na ole na-atọ ụtọ, yana ndị dị oke njọ. O yiri ka ọ na-arụ ọrụ.
Achọpụtala m maka ọrụ n'oge na-adịbeghị anya, m kwenyesiri ike na m ga-arụ ọrụ ka mma karịa nke ndị ọzọ nọ na ya. Ọ na-aga gbadaa £££ nakwa ma ha chọrọ a "ọkachamara" ma ọ bụ nnukwu gị n'ụlọnga.